Ungasiphasa kanjani isivivinyo ngaphandle kokufunda? | Ukwakheka nezifundo
Ungasiphasa kanjani isivivinyo ngaphandle kokufunda?
UMaite Nicuesa | 15/05/2021 23:51 | Amathiphu
Ukuphasa isivivinyo ungafundanga nhlobo akuyona into engeke yenzeke. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi awufundanga kangako njengoba ubungadinga. Futhi, ngaphandle kokuzilungiselela ngokuphelele isivivinyo, uyamukelwa. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zezivivinyo. Labo abanefomethi Thayipha ukuhlolwa Banethuba lokuthi banikeza impendulo ekhonjisiwe phakathi kwezinketho eziningi ezitholakalayo. Ungazama ukuthola imininingwane usebenzisa ukucabanga kwakho. Ku-Training and Studies sikunikeza amathiphu amahlanu awusizo.
1 1. Sebenzisa isikhathi ekilasini
2 2. Khetha izici ezibaluleke ngempela
3 3. Uhlaka nezifingqo
4 4. Qinisa ucwaningo ekugcineni
5 5. Ukuqonda ukufunda
6 6. Kuzame
1. Sebenzisa isikhathi ekilasini
Lokhu kunaka kubalulekile ngoba kusekilasini lapho kwenzeka khona okuningi kokufunda. Thatha amanothi bese uwabhala phansi uma ubona kunesidingo. Yini enye, buza uthisha noma imiphi imibuzo onayo. Mhlawumbe lokho kungabaza kunomunye ofunda naye ekilasini. Futhi-ke, impendulo yothisha isiza wonke umuntu okhona ukuqonda kangcono ucezu lolwazi.
2. Khetha izici ezibaluleke ngempela
Uma unesikhathi esincane sokufunda, ngoba usuku lokuhlolwa okulandelayo selusondele, khetha amaphuzu abaluleke kakhulu bese ugxila kuwo. Okungukuthi, ilahla ezinye izindaba ezingagxila ekuhlolweni. Kodwa-ke, lapho lezi zimo zenzeka, ungasebenzisa leli qhinga ukulandisa isikhathi esikhona sokutadisha kuleyo mibuzo okungenzeka kakhulu ukuthi ingene esivivinyweni.
3. Uhlaka nezifingqo
Kunomehluko omkhulu phakathi kokwazi konke ngesihloko nokungazi noma yiluphi ulwazi. Ngakho-ke, futhi ungakwenza lula okuqukethwe futhi ukuhlanganise ngokufeza imidwebo nezifingqo ezikusiza ukuthi udlule yize ufunde kancane. Ngaphambi kokwenza uhlaka, dwebela umbhalo. Maka ngombala owuthandayo, noma ngepensela, imibono efanelekile. Futhi sebenzisa lolu lwazi lwangemuva ukuthuthukisa isethulo esilula ngokuhamba kwesikhathi.
4. Qinisa ucwaningo ekugcineni
Njengoba sesifikile ezinsukwini ezingaphambi kokuhlolwa ngaphandle kokufunda, kungaba yisizathu esizwakalayo sokuthi kungani umfundi enquma ukungasizami. Futhi nokho sisekhona isikhathi sokuzinika ithuba. Ukufunda ngaphansi kwengcindezi kungumzamo omkhulu. Futhi-ke, ungahle ube nenhlanhla yokubuzwa okuthile esivivinyweni osifunde kulesi sigaba sokugcina.
5. Ukuqonda ukufunda
Kunamaphutha okuhumusha okuthi, zisuka nje, abeka kabi amathuba okuthola impendulo eyiyo. Ngakho-ke, funda imininingwane ngokucophelela bese unikela isikhathi osidingayo kulo mbuzo. Hhayi ngokufuna ukuthuthuka ngokushesha, uzoqeda isivivinyo ngaphambi kwesikhathi. Into ebaluleke ngempela ukuqhubekela phambili igxathu negxathu. Sebenzisa ukucabanga kwakho ukuze, ukusuka esitatimendeni sombuzo, ubeke impendulo. Kwezinye izimo, ungahle ungazizwa ukulungele ukukwenza. Kodwa futhi kungenzeka ukuthi unezindlela nezinsiza zokuveza eminye yemibono esemqoka ngamazwi akho.
Qala ukuphendula imibuzo elula noma lawo maphuzu owaziyo impendulo kuwo. Ungabambeki kulezo zivivinyo ezibonakala zinzima kakhulu.
Noma kunini lapho ubhala khona isivivinyo, noma usilungiselele kahle isivivinyo, uba nezinga elithile lokungaqiniseki ngoba awazi ukuthi imibuzo ethile izoba yini. Mhlawumbe wazi umngane wakho okwathi ngesikhathi esithile wakwazi ukuphasa isivivinyo engafundanga. Lokhu cishe akunakwenzeka, ikakhulukazi, esigabeni seyunivesithi lapho izinga lobunzima bezifundo liphakeme kakhulu. Kepha ngaphandle kwalokhu, ungathatha isivivinyo bese uzama. Eqinisweni, lokhu okuhlangenwe nakho kungakunika izifundo ezibaluleke kakhulu ngekusasa. Lokho wukuthi, lolu phiko lungakusiza ungaphindi amaphutha afanayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izaziso » Amathiphu » Ungasiphasa kanjani isivivinyo ngaphandle kokufunda?
Izizathu ezi-5 zokufunda iDegree in Social Education